OTU ESI ACHỌTA NỌMBA YOTA - NGWA - 2019
Ejiri ngwaọrụ ndị dị mfe na ndị a pụrụ ịdabere na ya site n'aka ndị ọrụ ha. Enwetara, tinye n'ime ọdụ ụgbọ USB nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nkeonwe, nwere ike ịnweta Ịntanetị ngwa ngwa ma chefuo ngwaọrụ ahụ. Mana kwa ọnwa ị ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ nke onye na-enye gị, na maka nke a, ị ga-ama nọmba nọmba modem gị. Kedu ka ị ga-esi chọpụta?
Rata nọmba modem Yota
Mgbe ịzụrụ modem, onye ọrụ ọ bụla na-abanye na nkwekọrịta na Yota, akwụkwọ a nwere ọnụ ọgụgụ nke akaụntụ onwe onye iji kwụọ ụgwọ maka njikọ Ịntanetị. Ma akwụkwọ ndị a nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụ furu efu. Enwere ike ịchọta nọmba Yota gị na ụzọ ndị ọzọ? N'ezie Anyị ga-agbalị ime ya ọnụ.
Usoro 1: Akaụntụ Onye ọrụ
Onye ọ bụla Yota subscriber nwere akaụntụ onwe ya na ebe nrụọrụ weebụ na-eweta, nke ị nwere ike ịhọrọ tarifu, kwụọ ụgwọ maka ọrụ, gbanwee data onwe gị, na ihe ndị ọzọ. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọnụọgụ nke Yota modem gị.
Mwepụta ihe ọ bụla nchọgharị ma gaa na saịtị Yota.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Yota
Na akụkụ aka nri nke ibe weebụ pịa njikọ. "Akaụntụ M". Na ya anyị na-amụta ihe ọmụma niile anyị chọrọ.
Na windo nyocha, buru ụzọ gaa taabụ "Modem / Router"wee tinye nbanye na paswọọdụ na mpaghara kwekọrọ na kwado mkpebi gị site na ịpị bọtịnụ na bọtịnụ ahụ "Nbanye".
Anyị na-adaba na akaụntụ nkeonwe gị, site n'elu pịa bọtịnụ òké aka ekpe na ihe ahụ "Profaịlụ".
Na taabụ ọzọ n'ahịrị "Nọmba akaụntụ onwe onye" hụ ihe anyị na-achọ. Ugbu a, o kwere omume, site na iji ọnụ ọgụgụ ndị a, iji kwụọ ụgwọ maka ọrụ nke onye na-eweta. Emela!
Usoro 2: Ntọala Web Modem
Enwere usoro ọzọ maka ịchọpụta nọmba modem Yota. Enwere ike ime nke a site na netwọk weebụ nke ngwaọrụ, n'ebe ahụ ị nwere ike ilele ID ID ma chọpụta nọmba akaụntụ ahụ.
Mepee ihe nchọgharị Ịntanetị ọ bụla, na ụdị ihe ntanetị:10.0.0.1ma pịa igodo Tinye.
Na taabụ nke àgwà nke njikọ na eserese "ID" gụọ nọmba njirimara nke ngwaọrụ gị.
Anyị na-akpọ nkwado ọrụ nkwado site na ịkpọ 8-800-700-55-00 ma gwa onye ọrụ ahụ ka ọ kọọrọ gị nọmba akaụntụ nke ID, nke ọ ga-eji obiọma mee site n'ịkọ ozi kọntaktị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ Yota tech support na ederede site na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Dịka ị hụworo, ọ dị mfe ịkọwa data na modem Yota gị, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịchọpụta ihe niile ị chọrọ. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị chefuru ịkwụ ụgwọ maka ịnweta Ịntanetị na Yota, ọ gaghị agbanyụ, mana ọ na-ebelata ọsọ ọsọ na 64 Kbps. Nke a dị mfe maka ndị ọrụ niile.
Hụkwa: Ịtọlite ​​modem Yota